Kwete Masangano Akakwana Anotaurira Tarisiro Yekutora | | Martech Zone
Chimwe chezvishamiso zvangu mukuvhura agency yedu makore manomwe apfuura ndechekuti ndakafunga kuti indasitiri ye agency yakavaka zvakanyanya pahukama kupfuura iko kukosha kwemasevhisi. Ini ndingatoenda kusvika pakutaura kuti zvakare zvakanyanya zvinoenderana nezvakanaka zvehukama zvakare.
Mutengi wako akavimba newe uye wave uchishanda navo kwemakore? Zvakanaka, izvo zvinotungamira kune vanotumirwa uye kuenderera kwakasimba hukama. Wakagezera mutengi wako nezvishamiso, senge tekinoroji yazvino uye matikiti kumusangano mukuru unotevera? Iwe unogona kushamisika kuti vangani vatengi izvo zvinokutorera iwe zvakare.
Wakambopa yako mutengi ne ukoshi? Zvinosuruvarisa kuti izvo chaizvo hazvina zvazvinoita zvinoitwa nevamwe. Tagara tichidadira basa redu zvichibva panzira yatinosimudzira nayo nekufambisa vatengi vedu kumberi. Takashamisika kuona kuti vamwe vavo havana.
Kwemakore, isu patinotora vatengi kuenda, isu tinoita zvimwe zvakawanda due diligence kuve nechokwadi kuti ivo vatengi vakanaka kwatiri zvakanyanya sezvavanenge vachiyedza kuti vaone kana tiri isu mutengi akakodzera kwavari. Dzimwe nguva tarisiro dzinoda kuenda kumberi uye isu tadzosera kumashure kana kufamba tichienda. Dzimwe nguva bhizinesi ratiri kutoshanda neanoshandura hutungamiriri uye isu tadzosera kumashure kana kuenda kure.
Patakasiya pane mumwe mutengi hombe, director wavo mutsva akayambira, "Haufanire kupisa mabhiriji ako." Ndakamuudza kuti isu tanga tisingatarise kuti tiite izvozvo asi anga achikanganisa zvakanyanya achisiya zano ratakagadzira. Yakanga yakabudirira kukura kwekambani kudiwa pamhepo kanoverengeka pamusoro pemakore. Akasvebera kuti aiziva zvirinani. Saka ndakapindura kuti taizodzoka kana abva pakambani. Makore gare gare uye ndinotya isu tiri padyo - iyo kambani yarasa simba rese ratakapa ivo… uyezve vamwe. Ndingangodaro ndakapisa mabhiriji angu pamwe chete naye, asi ndinotenda tichabatsira kambani zvakare munguva pfupi.
Munguva pfupi yapfuura, tanga tine yekutengesa yepamusoro yekutengesa tibate isu kuti tibatsirwe. Bhizinesi raive kuchinjisa muridzi uye muridzi akasimba neinoshamisa network yaitengesa bhizinesi kune vamwe vechidiki vane tarenda varidzi. Kunyangwe hazvo aive achienderera mberi, aive nehanya nenhaka yake uye aida kuona kuti varidzi vatsva vabudirira. Sezvo ivo havachagone kuvimba ne ake network, akatibata kuti tione kana tichigona kukura kuziva uye kuda online.
Ehe, tinogona. Takataura zvinhu zvakati wandei zvine hunyanzvi nehuvepo hwavo hwewebhu pamwe nekukurukura mafambiro azvino muindasitiri yake. Ipo iye achitenda kudiwa kwekambani yake kudzikira, isu takawana kukura kukuru uye kuwedzera online. Yake yekutengesa yekutengesa yemuno yaive neyekuverenga uye zviyero zvekuenda nyika - iye aisamboshanda pane iyo digitally sezvo aigona kuvimba netiweki yake.
Sezvo isu patakakura padhuze nekukurukura bhajeti uye chikumbiro, akatanga kusundira kumashure kuti bhajeti yake yaive shoma. Takakurukura netiweki yake uye nemakore zvakatora kuivaka. Takakurukura nezve izvo zvaaida kuti agadzirise uye akure bhizinesi. Akasundira kumashure kuti anzwe sekunge kungatambisa mari, achitsiva saiti yaakange atovaka iyo isina kubatsira bhizinesi rake zvachose. Isu takadzokorora kwaari marongero atinozoendesa - kuti aisangova saiti chete, yaive yekumaka, kusimudzira chigadzirwa, zvemukati, kutsvaga kwekuziva, ecommerce kugona… anga asiri kubhurawuza.
Iyi mienzaniso miviri makambani anga aine mukana unoshamisa. Yekutanga, isu takanyatso batsira kusvika nekukudziridza kugona nayo uye zvakakonzera mamirioni emadhora kune yepazasi rekambani. Uye ini ndinogona kukuvimbisa iwe kuti yedu yemari yaive chidimbu cheiyo. Yechipiri yaive nekwaniso yemamirioni emadhora, asi muridzi wacho aisakwanisa kuzviona kunyangwe tichiedza kuzvitsanangura sei. Zvichida taigona kunge takanyatsogadzirisa iko kupihwa nezvakanaka… asi ndinofungidzira kuti zvingadai zvakabatsira. Isu tichiri kuda kutenga-mukati kubva kumutengi uye mari yakakura yakaitwa kufambisa tsono.
Saka takafamba. Uye paakatikumbira kuti tidzoke kuzokurukura zvimwe, takamuudza kuti taifanira kuenderera mberi. Isu takave netarisiro avo vakaziva mukana uye nekukanganisa kwakaitwa nebasa redu kune vamwe vatengi.
Achamisikidza zano redhijitari? Zvingangodaro ... anowana imwe agency yekumuitira basa. Mumwe munhu anowedzera kuvimbisa, anokanda chirongwa kana mushandirapamwe, obva asiya nekashoma kemari uye mutengi asingaite zvirinani. Ini ndinoshuvira dai masangano anga asina nzara uye vamwe vaizoudza tarisiro yacho famba famba. Makore apfuura, ndingadai ndisina kumbotaura izvozvo.
Makore apfuura, ndingadai ndisina kumbotaura izvozvo. Ndingadai ndakati ibasa redu kudzidzisa tarisiro yedu nevatengi. Kana ivo vasina kuziva kukosha uye kudyara kwaida kuitwa, ndiyo yaive mhosva yedu. Asi kwete zvekare… Kana tarisiro kana vatengi vasingakwanise kuona kuti pasi zvachinja, kuti vakwikwidzi vavo online vari kudya masikati avo, uye kuti vanofanirwa kuita zvakakomba nekudyara seti muzana yemari yakazara kumashure mukushambadzira kwavo, ini ' m kungorega kutambisa nguva yangu kuyedza kuzvitsanangura futi.
Ndakatiza vhiki kana kupfuura apfuura izvozvo Vatengesi vaive chikamu chechinetso, kazhinji ichiisa tarisiro dzakakura nemitengo yakaderera. Nekuda kweizvozvo, mutengi haatombobudirira uye, sezvo mutengo wemasevhisi avakabhadhara asina kushanda, vanozeza kuisa mari zvakanyanya. Kana munhu wese achitaura nezve kuti zviri nyore sei zvinhu izvi (kana zvisiri), isu tine dambudziko reindasitiri futi.
Unofungei? Ini ndakurumidze kupindura? Pamwe ndanga ndichiita izvi kwenguva refu uye ndiri kungoita jongwe.
Tags: bokaagency yekudyaramutengokudzinga vatengikupfura tarisirokushambadzira agency mutengoMarketing nziradzoka pakudyaraRoyiukoshi